Iimpompo ze-Slurry, iiMpompo ze-Slurry eziHolizonti, Impompo ye-Froth-Boda
Iimpompo zodaka ezithe tye
iimpompo ezithe nkqo sump eziludaka
Iimpompo zeSlurry ezingaphantsi kwamanzi
Impompo eludaka ephantsi kwamanzi ephantsi kwamanzi
Iimpompo zegwebu ezithe tyaba
Iimpompo zeFroth ezithe nkqo
Impompo yeGravel yeSanti / iMpompa yokukhupha
Iinxalenye zempompo zentsimbi
Iinxalenye zeMpompo yeRubber
Amalungu epompo yePolyurethane
Izahlulo zePump zeCeramic ze-SiC
Impompo yamanzi ethe tye
Impompo engaphantsi kwamanzi
Impompo yamanzi eSuction kabini
Impompo yamanzi yamanqanaba amaninzi
Umbhobho Impompo yamanzi
Impompo yogutyulo oluthe tye
Impompo yamanzi amdaka angaphantsi kwamanzi
Impompo yogutyulo oluthe nkqo
Impompo yeekhemikhali zeFluoroplastic
Ipompo yekhemikhali ye-API610
Impompo ye-Centrifugal yokuzenzela
Funa umntu onokuthi avelise into oyifunayo kwaye abe noyilo lwesiko oluprintiweyo ngokweenkcukacha zakho. Ke inkonzo yethu ye-OEM/ODM yeyakho!Funda ngokugqithisileyo
Thenga iodolo epheleleyo emva kokuqinisekisa umgangatho wemveliso.Emva koko inkonzo yethu yeSampuli yoMyalelo yenzelwe wena!Funda ngokugqithisileyo
Ungathanda ukutyelela eTshayina kwaye unomdla ekusebenzeni nathi. Ke inkonzo yethu yoKhenketho lweFactory yeyakho!Funda ngokugqithisileyo
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd liqumrhu elisebenzela ukuthengisa impompo yamazwe ngamazwe kwi-PRC. Isebenza ikakhulu impompo kunye nezixhobo eziqhutywa yimpompo, iinxalenye zempompo kunye nokumelana nokunxiba iicastings, abanye oomatshini behydraulic, izincedisi njl.
SINGO EHLABATHINI LONKE
Inkampani yethu ineenjineli eziphezulu kunye neengcali zakudala. Ikwanazo neetalente zentengiso ezichwepheshile ezilwaziyo urhwebo lwangaphandle ngobuchule kwaye zinamava amakhulu kwaye zizele bubuvulindlela kunye nomoya wokudala. Inkampani yethu iya kusebenza kwingqondo "ejolise kubantu, ingqibelelo yeShishini" kwaye yanelise imfuno yabathengi ngokukhawuleza nangempumelelo; Ngaphandle koko inenkqubo yolawulo lwezenzululwazi kunye nenkcubeko yeshishini enzima. Okwangoku, umthengi wenkampani uthatha ngaphezulu kweendawo ezingama-50 kunye neendawo. Sele yenze inethiwekhi yokuthengisa eyomeleleyo, inkqubo yenkonzo efanelekileyo efanelekileyo kunye nombutho worhwebo oluqinileyo.
Izahlulo zeMpompo zeFroth ezithe tyaba
Isihluzi esithe tyaba sokucofa iMpompo yokuFundisa
impompo yodaka lwerabha ekwaziyo ukunxiba
TZM TZS Series Pump Ludaka
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd igxile ikakhulu kwimveliso kunye nonikezelo lweempompo ezikumgangatho ophezulu zodaka kunye neenxalenye zempompo ezinodaka. Iimpompo zethu zenzelwe iindawo zokupompa ezinobunzima kunye ne-corrosive.Zingenziwa nge-chrome ephezulu, iindidi ezininzi ze-elastomers okanye zakutshanje kwizinto ze-ceramic zobomi obude benkonzo kunye nokusebenza okuphezulu.
Isebenza ubukhulu becala impompo & nezixhobo eziqhutywa impompo, amacandelo impompo & nokumelana enxibe castings, abanye oomatshini hydraulic, izincedisi njl. Iimveliso ziqulathe impompo eludaka, API 610 yepetroli-oyile & iimpompo zekhemikhali, iimpompo zamanzi ezingamashumi series, ngaphezu kwekhulu. iintlobo , amawaka eemodeli. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, i-metallurgy, imigodi yamalahle, amandla ombane, i-petroleum, iikhemikhali, unikezelo lwamanzi kunye neshishini lokuhambisa amanzi njalo njalo.
Ziziindawo ezinokutshintshelana nenye yezona mpawu zaziwa kwihlabathi liphela kwishishini lempompo eludaka. Oko kuthetha ukuncitshiswa ngakumbi kweendleko zabathengi ngenxa yokuhlanganiswa kwe-inventri kunye nokutshintshiselana nezixhobo ezikhoyo. I-Boda ayinikeli kuphela amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza siyazingca kwinqanaba lenkonzo kunye nenkxaso yobugcisa esiyinikezela kubaxhasi bethu.
Ayingombandela nje wokufumana elona xabiso lilungileyo kunye nokuhanjiswa kodwa eyona nkonzo ilungileyo nayo. Ndicinga ukuba uya kufumanisa ukuba ukwenza iqabane leShijiazhuang Boda Industrial Pump Company iya kuba sisigqibo sakho esilungileyo sokufumana ixabiso lokwenyani ekusombululeni iingxaki zakho zempompo ezinodaka.
Inkampani yethu iya kusebenza kwingqondo "ejolise kubantu, ingqibelelo yeShishini" kwaye yanelise imfuno yabathengi ngokukhawuleza nangempumelelo; Ngaphandle koko inenkqubo yolawulo lwezenzululwazi kunye nenkcubeko yeshishini enzima. Okwangoku, umthengi wenkampani uthatha ngaphezulu kweendawo ezingama-50 kunye neendawo. Sele yenze inethiwekhi yokuthengisa eyomeleleyo, inkqubo yenkonzo efanelekileyo efanelekileyo kunye nombutho worhwebo oluqinileyo.
FUMANA IINDABA ZAMVA KUTHI
Kumantla welali yaseShilipu, kwiSithili saseChang'an, eShijiazhuang, eTshayina.